Dharka dhaadheer ee wanaagsan, aasaasiga ah ee aad u baahan tahay gu'gan | Ragga Stylish
Michael Serrano | | nololeedka, fashion, Isbeddellada
Kuwa boodbooda dhuuban ee caadiga ah waxay si fiican ula shaqeeyaan wax walba, macno ahaan. Oo ay ku jiraan qaar ka mid ah joornaalkaaga, labadaba midabyo qabow iyo diirran, waa fikrad aad u fiican in lagu helo muuqaallo muuqaal ah xilliga gu'ga.
Isku-darka soo socdaa waxay muujinayaan farqiga weyn ee dharkan. Layaab ma leh, waxaa loo tixgeliyaa a aasaasiga ah xarfaha waaweyn ee labiska labka:
1 Fadhi quruxsan oo funaanad + Suud ah
2 Funaanad caadi ah oo wanaagsan + Chinos
3 Suugaan caadi ah oo wanaagsan + Surwaal dhar ah
4 Funaanad wanaagsan oo wanaagsan + Jeenis
5 Funaanad Caan ah oo wanaagsan + Joggers
Fadhi quruxsan oo funaanad + Suud ah
Ku boodboodayaasha caatada ah ee caatada ah ayaa ah beddel dabacsan oo ku habboon shaatiyada. Tixgeli iyaga markaad u baahan tahay sii taabasho shakhsi ahaaneed muuqaalkaaga caqliga leh. Dhar kale oo si aad ah ugu shaqeeya ujeedadaas ayaa ah shaarka loo yaqaan 'polo smart'.
Funaanad caadi ah oo wanaagsan + Chinos
Cambaar, € 39.99
Ku dheji boodboodayaasha caatada ah ee khafiifka ah chinos si aad u sameysid firaaqooyin fudud oo raaxo leh, laakiin ma ahan turxaan la'aan.
Suugaan caadi ah oo wanaagsan + Surwaal dhar ah
Mr Porter, 110 XNUMX
Markaad ku midoobeysid surwaal dhar ah iyo kabo isboorti, dharka na khuseeya markan ayaa kaa caawin kara hel vibes aad u casri ah. Ku dhammee muuqaalka jaakad bambo leh ama xitaa denim.
Funaanad wanaagsan oo wanaagsan + Jeenis
Mr Porter, 690 XNUMX
Jeanska lugta toosan ee dhejiska ah ayaa kor u kacaya. Iyo boodboodayaasha caatada ah ee caadiga ah waxay ka mid yihiin dharkaas oo ay ugu wacan tahay jarista caatada ah ee ay si fiican ula shaqeeyaan. Waana lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in, si loo ilaaliyo dheelitirka, laguma talin karo inaad xirato dhar dabacsan labada kor iyo hooseba.
Funaanad Caan ah oo wanaagsan + Joggers
Ka shaqee dhinaca isboortiga adiga oo ku beddelaya dhididka caadiga ah maro khafiif ah oo khafiif ah markii aad xiraneyso joornaalada. Sida aad u jeeddo, natiijada waa mid aad u cusub; iyo xitaa miyir, haddii aad ku sharraxdo midabada dhexdhexaadka ah sida cawl madow, buluug buluug ama madow.
Ogsoonow: Qiimaha oo dhan waxaa loogu talagalay maaliyadaha oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Maxay Sabab u tahay in Dhididku khafiifa yahay Maalgashi Guga oo Weyn
Muraayadaha casriga ah ee sanadkaan